I-Hexadrone skyview wifi - i-6 rotor drone nevidiyo yesikhathi sangempela | Izindaba zamagajethi
I-Hexadrone skyview wifi, ukuhlaziywa okugcwele
UMiguel Gaton | | drones, Izibuyekezo, I-Robotics
Uma uzimisele nge amadroni, namuhla sikulethela i- I-Hexadrone skyview wifi, i-drone, njengoba igama layo likwenza kucace, inama-rotor ayi-6 futhi iyayivumela bukela amavidiyo ngokulungiswa okuphezulu ngesikhathi sangempela kusuka ku-smartphone yakho, Izici ezimbili ezingajwayelekile kakhulu kuma-drones aleli banga.
Le modeli ilula kakhulu ngesisindo, evumela indiza eshesha futhi ngokungangabazeki izothokozisa iningi labashayeli bezindiza abavame ukuqala ngalolu hlobo lwendiza. Intengo yayo ingu- € 169 futhi ungakwazi Thenga kulesi sixhumanisi.
1 Amavidiyo ngesikhathi sangempela ku-smartphone yakho
2 Izici zobuchwepheshe ze-Hexadrone skyview wifi
3 Imisebenzi ye-Drone nendiza
5 Amaphoyinti afanele
6 Amaphuzu wokulwa
7 Igalari yezithombe zeDrone
Amavidiyo ngesikhathi sangempela ku-smartphone yakho
ISkyview ifaka phakathi Ikhamera ye-Wifi FPV ezokuvumela ukuthi ujabulele amavidiyo endiza ngesikhathi sangempela ku-smartphone yakho. Ngalokhu kulula kakhulu, kufanele nje uxhume iselula yakho kwi-Wi-Fi ekhishwa ikhamera ye-drone futhi ukusuka lapho uzokwazi ukubona konke okubonwa yidrone ngesikhathi indiza yayo. Ngaphezu kwalokho, lesi siteshi sinesesekeli esincane sokukwazi ukudweba iselula ukuze ukwazi ukubuka ividiyo kahle ngenkathi ushayela umshini.
Ngenkathi ikhwalithi yekhamera yinhle, zama ukukwenza ukushayela i-drone kumodi yomuntu wokuqala kuyinto engatholakali kunoma ngubani ngakho-ke asincomi abasebenzisi abaqalayo ukuzama ukundiza i-drone ngale ndlela. Uma ungumsebenzisi oqalayo, hlola i-drone njengokujwayelekile futhi uvumele abangani bakho babuke ividiyo ngesikhathi sangempela futhi uzogwema izingozi. Khumbula futhi ukuthi isebenza nge-Wi-Fi yeselula, ngakho-ke ububanzi bayo besenzo abudluli kumamitha angama-20.
Izici zobuchwepheshe ze-Hexadrone skyview wifi
I-Hexadrone skyview wifi
Ikhamela I-C4002 enesinqumo 720x480p kuzimele ezingama-30 ngomzuzwana
Ibhetri I-750 mAh ne-7.5V
Isikhathi sokushaja Imizuzu ye-45
Impilo yebhethri I-8-10 minutos
Inani lama-rotor 6
Ividiyo yesikhathi sangempela «Yebo (ku-Smartphone yangaphandle nge-Wifi)
Isiteshi 2.4 I-Ghz
Intengo 169 €
El Isikhathi sokushaja i-drone cishe imizuzu engama-45 bese-ke singayithokozela imizuzu eyi-8 - 10 ngokuya ngamandla endiza.
Imisebenzi ye-Drone nendiza
El I-Hexadrone skyview wifi Kuza nemisebenzi ejwayelekile yemodi ye-aerobatic yokuvula, ukulawula ngokuphelele ukusebenzisa i-drone kungakhathalekile ukuthi indizela kithi noma cha futhi izibani zokuma ukukhombisa ukulandela umkhondo wedrone.
Kubuye futhi inkinobho yokubuyela ekhaya nobubanzi besenzo esingaba ngamamitha ayi-100 (khumbula ukuthi amavidiyo wesikhathi sangempela asebenza ne-Wi-Fi ye-smartphone, ngakho-ke awavami ukudlula amamitha angama-20).
Kuyinto evumela abangenalwazi kakhulu ukuthi baqale ukusebenzisa ama-drones, kepha ngenxa yejubane layo elihlukile linikeza namahora wokuzijabulisa kulabo basebenzisi abaphambili kakhulu. Ama-rotor ayo ayi-6 avumela a indiza elawulwayo futhi ikhulise ukuzinza kwensimbi lapho kufanele sindiza ngamanye umoya; Iphuzu elaziswa kakhulu ngoba ngenxa yokukhanya nobukhulu be-drone umoya uyithinta kakhulu.
Iza ne onogada bendiza kanye nezikwele zokufika ukugwema ukushayisana okungazelelwe nomhlabathi noma nganoma yisiphi isithiyo. Zombili lezi zinto zihlukaniswe embonini kodwa zihlanganiswa kalula ngezikulufo ezimbalwa kanye ne-screwdriver esiza ebhokisini.
Ikhamera yesikhathi sangempela
Umsebenzi wokubuyela ekhaya
Intengo ethe xaxa
Igalari yezithombe zeDrone
Lapha ungabona igalari enezithombe ze-Hexadrone skyview wifi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Hexadrone skyview wifi, ukuhlaziywa okugcwele
INintendo iyavuma Ukwehluleka Kwayo Nge-Wii U; kepha ngeke baphinde
I-Google Wallet iyabuyekezwa ukuze ikwazi ukufaka imali emabhange